कहाँ गयो ३४ हजार हतियार ? – Himalaya TV
Home » समाचार » कहाँ गयो ३४ हजार हतियार ?
काठमाण्डौ,१९ जेठ । स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले लाइसेन्स प्राप्त हतियार बुझाउन निर्देशन जारी गरे पनि करिब ३४ हजारभन्दा बढी हतियारको अत्तोपत्तो छैन ।
गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ३५ हजारभन्दा बढी लाइसेन्स प्राप्त हतियार सर्वसाधारणको नाममा छ । गृहले लाइसेन्स प्राप्त हतियार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । गृहको निर्देशनमा भनिएको थियो, ‘निर्वाचन अवधिभर लाइसेन्स प्राप्त हतियार जिल्ला प्रसाशनमा राख्ने ।’
सर्वसाधारणबाट लाइसेन्स प्राप्त हतियार दुरुपयोग भए कारबाही हुने उहाँले बताउनुभयो । ‘हतियार दुरुपयोग भएको पाइए कारबाही हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो । हतियार नबुझाएकालाई गरिने कारबाहीका बारेमा भने गृह मौन छ । यही कारण हतियार बुझाउन आलटाल भएको हुन सक्ने एक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आशंका व्यक्त गरे ।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएसँगै अवैध हातहतियारको बिगबिगी सुरु भएको थियो । तराईमा उदाएका अनेकौं सशस्त्र समूहको उपस्थितिले साना तथा ठूला हतियार छ्यापछ्याप्ती छन् । सशस्त्र द्वन्द्व तथा तराईको सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा अवैध हतियार बुझाउनेलाई सरकारले स्वागत पनि गर्‍यो ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन अघि इलाम जिल्ला प्रशासनले वैध-अवैध हातहतियार बुझाउन अभियान चलाएपछि त्यहाँ थुप्रै अवैध हातहतियार प्रशासनको नियन्त्रणमा आएको थियो । त्यसलगत्तै गृहले देशव्यापी रूपमा यो अभियाननै चलाएको थियो । ‘अभियान पहाडी भूभागमा सफल देखिए पनि तराईमा भने त्यति प्रभावकारी भएन’, गृहका एक उच्च अधिकारीले भने ।
तराईमा थुप्रै अवैध हातहतियार भएको अनुमान छ । प्रहरीले बेवारिसे अवस्थामा र मान्छेसहित हतियार बरामद गर्ने गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा गुन्डागर्दीमा संलग्नदेखि सशस्त्र आन्दोलनमा सहभागी समेत छन् ।
झापा, मोरङ, इलाम, सप्तरी, सिराहालगायत थुप्रै जिल्लामा लाइसेन्स प्राप्त हतियार नबुझाइएको गृह स्रोतले जानकारी दिएको छ । सबैभन्दा बढी काठमाण्डौमा लाइसेन्स प्राप्त हतियार छन् । काठमाण्डौ जिल्ला प्रशासनले मात्र हालसम्म १२ हजार ८ सय ४४ वटा लाइसेन्स प्राप्त हतियार जारी गरेको छ ।
यसैगरी रूपन्देही, कास्की, लमजुङ, ललितपुर, बाँके, बैतडी, डडेल्धुरामा पनि एक हजारभन्दा बढी लाइसेन्स प्राप्त हतियार सर्वसाधारणको नाममा जारी गरिएको छ । याे खबर अन्नपूर्ण पाेस्टमा छ ।